Muxuu ka dhigan yahay kaarkii casaanka ahaa ee uu kooxda Arsenal galabta ka qaatay Maitland-Niles? – Gool FM
(Yurub) 28 Abriil 2019. Kooxda kubadda cagta Arsenal waxaa kaarka cas ka qaatay ciyaaryahankeeda Ainsley Maitland-Niles kulanka ka soconaya garoonka King Power.
Kulankan oo u dhexeeya kooxaha Leicester City iyo Arsenal ayaa lagu kala nastay barbaro goolal la’aan 0-0.
Ainsley Maitland-Niles ayaa kaarka guduudan la tusay kaddib markii uu guddoomay labo kaar oo kuwa digniinta ah isla qeybta hore ee ciyaarta.
Xiddigan oo taageerayaasha inta badan ay u yaqaanaan caasi waalid ayaa kaarka hore ee digniinta ah qaatay 8’daqiiqo, waxaana kaarkiisa labaad ee Jaalaha uu hantiyey 36’daqiiqo markaasoo loo raaciyey kaarka cas.
Haddaba muxuu ka dhignaa kaarka cas ee galabta loo taagay laacibka Gunners ee Ainsley Maitland-Niles?
>- Ainsley Maitland-Niles ayaa garoonka laga saaray oo la siiyey kaarka cas markii ugu horreysay ee xirfaddiisa ciyaareed ee sare.
>- Arsenal ayaa labadii kaar cas ee ugu dambeeyey oo ay qaadatay horyaalka Premier League waxaa loo taagay qeybta hore iyagoo marti u ah kooxda Leicester City xilli ciyaareedkii hore waa qaatay Mavropanos maanta waxaa ka qaatay Maitland-Niles.